Ms Pyuiyi waxay ka nixisay taageereyaal daanka ka tuuraya Boostada Instagram-ka cusub - Cradle View
Leave a Comment on Ms Pyuiyi oo ka nixisay taageereyaal daanka ka tuuraya Post Instagram cusub
Ms Pyuiyi's Instagram-ka
Ms Pyuyi's Instagram soo socda ayaa si degdeg ah u koraya. CVBaaritaankii ugu dambeeyay ee ay sameysay ayaa shaaca ka qaaday inay kortay akoonkeeda 1m oo raacsan. Sida cad, tani waxay ku socotaa heer aad u degdeg badan. Dardaaran Marwo Pyuyi u hormari xisaabteeda runta sare heerka fasalka. Waxa hubaal ah inay ahaan lahayd suurto gal si ay u hesho 20m by 2022.
Qoraal uu wadaagay Siew Pui Yi 🤍 (@ms_puiyi)
Ilaa intee ayay noqon doontaa Ms Pyuiyi Instagram ka hor?
Tani waa mala-awaal kaliya laakiin kobaca iyo xawliga xisaabtu been ma sheegaan. Waxaa la filayaa inay noqotay xiddig Instagram-ka ah oo si weyn loo yaqaan goor hore markii ugu horreysay ee ay bilawday inay soo dhejiso. leh Kaliyaasha, Patreon, iyo goobo kale oo ay ku sugan tahay. Koritaankiisu waa lama huraan.
Hoos waxaad iska qori kartaa liiska iimaylka si aad u hesho warar badan oo ku saabsan Marwo Puiyi iyo Instagramkeeda. Fadlan hoos ku qor subscribe:
Gelitaan Hore Kirada-A-saaxiibka Xiliga 2 Taariikhda Horeeya + Dhammaadka waa la Sharaxay
Gelitaanka Xiga Sahaminta Doorka Waxqabad ee Akane ee Rabitaanka Xumaanta